【 ဆောငျးပါး 】 တေးသံခြိုခြိုတက်ကသိုလျ၊ ၂၀၂၀ ရာပွညျ့အကွို ပွသနသေညျ့ စာရေးသူ၏ စတေနာ | Opinion Leaders
မခငျနု (ဒဿန) ရေးသားပွုစုသညျ့ တေးသံခြိုခြိုတက်ကသိုလျ၊ ၂၀၂၀ ရာပွညျ့အကွို စာအုပျကို စိတျကူးခြိုခြို စာအုပျတိုကျက ၂၀၁၉ ဒီဇငျဘာ ၈ ရကျနတှေ့ငျ ထုတျဝပေါသညျ။စာအုပျတှငျ အခနျး ၈ ခနျး ပါဝငျပါသညျ။ယငျးတို့မှာ မွနျမာ့သမိုငျးထဲကဂီတ၊ တက်ကသိုလျနှဈ ၁၀ဝ ကွေးမုံမွငျကှငျးစုံ၊ အနုပညာဒဿန၊ တက်ကသိုလျဖှဲ့ သီခငျြးမြားကို အနုပညာဒဿနရှုထောငျ့မှ လလေ့ာဆနျးစဈခွငျး၊ အထှထှေနေိဂုံး၊ ကမျြးကိုးစာရငျး၊ တေးဂီတဆိုငျရာ ကာတှနျးမြားနှငျ့ တက်ကသိုလျဖှဲ့တေးသီခငျြးမြား ဖွဈကွပါသညျ။
၂၀ဝ၃ ခုနှဈ ရနျကုနျတက်ကသိုလျမဂ်ဂဇငျးတှငျ ဖျောပွခဲ့သညျ့ စာရေးသူ မခငျနု (ဒဿန) ၏ ကဗြာကို အဖှငျ့ကဗြာအဖွဈ ဖျောပွထားပွီး နိဒါနျး၌ စာရေးသူက အဘယျရညျရှယျခကျြကွောငျ့ ဤစာအုပျကိုပွုစုခဲ့ကွောငျး အကယျြတဝငျ့ ရှငျးလငျးဖျောပွထားပါသညျ။
အခနျး (၁) မွနျမာသမိုငျးထဲကဂီတတှငျ ပြူခတျေ၊ ပုဂံခတျေ၊ မွငျစိုငျး၊ ပငျးယ၊ အငျးဝခတျေ၊ ညောငျရမျးခတျေ၊ ကုနျးဘောငျခတျေနှငျ့ ပါတျောမူပွီးစခတျေတှငျတို့ တီးခတျသီဆိုခဲ့သညျ့ ဂီတနှငျ့ သီခငျြးမြားအကွောငျးကို ရေးသားဖျောပွထားပါသညျ။
အခနျး (၂) တက်ကသိုလျနှဈ ၁၀ဝ ကွေးမုံမွငျကှငျးစုံ ခေါငျးစဉျအောကျတှငျ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ငှရေတု၊ ရှရေတု၊ စိနျရတုနှငျ့ ရာပွညျ့ကာလမြားတှငျ တှရှေိ့ရသညျ့ တေးသီခငျြးမြားကို ပျေါပေါကျလာပုံ နောကျခံသမိုငျးကွောငျးနှငျ့တကှ ပွညျ့စုံစှာဖျောပွထားပါသညျ။ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ငှရေတုကာလ (၁၉၂၀- ၁၉၄၅) ကို ဖျောပွရာတှငျ၊ ကိုလိုနီခတျေနှောငျး၊ ငှရေတုကာလ စဈတေးသံမြား၊ ငှရေတုကာလ ခဈြတေးသံမြား၊ ရုပျရှငျနှငျ့ ကပှဲတေးသံမြား၊ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ ကြောငျးသားသမဂ်ဂ၊ နဂါးနီ၊ အာဏာရှငျ၊ တို့ဗမာနှငျ့ ပါတျောမူ စသညျ့ ခေါငျးစဉျခှဲငယျမြားဖွငျ့ ရေးသားဖျောပွထားပါသညျ။
ကိုလိုနီခတျေနှောငျးကာလ မွနျမာ့နိုငျငံရေး အခွအေနကေို အကဉျြးခြုံးရေးသားပွပွီးနောကျ၊ ၁၉၂၀ ကြောငျးသားသပိတျတှငျ ကဆြုံးခဲ့ရသညျ့ ဗိုလျအောငျကြျော ကို ဂုဏျပွုရေးသားသညျ့ သီခငျြးမြားပျေါထှကျခဲ့ပုံကို ရေးသားထားပါသညျ။ထို့နောကျ တက်ကသိုလျ ငှရေတုကာလအတှငျး (၁၉၂၀-၁၉၄၅) ပျေါပေါကျခဲ့သညျ့ တေးသီခငျြးမြား ပျေါပေါကျသီဆိုခဲ့ကွသညျ့ အကွောငျးရငျးခံမြားအား ဖျောပွပေးထားပါသညျ။ဥပမာ - ရနျကုနျမွို့ကွီးကို မွနျမာနှငျ့ ဂပြနျတပျမြား ပွနျလညျသိမျးပိုကျစဉျ၊ ဘီအိုငျအရေဲဘျောမြားကို တက်ကသိုလျကြောငျးသားကြောငျးသူမြား အပါအဝငျ လူထုက ဆရာရှတေိုငျညှနျ့ ရေးသားသညျ့ ဖလျနဝေငျးသီခငျြးကို သီဆို၍ ကွိုဆိုခဲ့ကွပုံမြားနှငျ့ ဘီအိုငျအေ၊ ဘီဒီအခေတျေတှငျ ပျေါပေါကျခဲ့သညျ့ သီခငျြးမြားအကွောငျး ဖျောပွထားပါသညျ။ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးသညျ တေးဂီတ၏ အစှမျးထကျမွကျပုံကို သိရှိနားလညျသူဖွဈရာ ပွညျသူကို သီခငျြးဖွငျ့စညျးရုံးရနျ ဆရာရှတေိုငျညှနျ့အား သီခငျြးရေးဖှဲ့ စခေဲ့ပါသညျ။ဆရာရှတေိုငျညှနျ့ က ပွညျသူ့တပျမတျောသီခငျြးကို ၁၉၄၄ အောကျတိုဘာ ၂၃ ရကျနတှေ့ငျ ရေးသားပေးခဲ့ပွီး နောငျတှငျ သီခငျြးနာမညျကို တပျမတျောအငျအားဟု ပွောငျးလဲခဲ့ပုံမြားနှငျ့တကှ အဆိုပါသီခငျြးသညျ ဆရာရှတေိုငျညှနျ့၏ နောကျဆုံးလကျရာဖွဈကွောငျး စုံလငျစှာဖျောပွထားပါသညျ။
တက်ကသိုလျ ငှရေတုကာလအတှငျး ပျေါပေါကျခဲ့သညျ့ အခဈြသီခငျြးမြားအဖွဈ သကျဝေ၊ ခဈြဒုက်ခ၊ မိုးဒဝေါ သီခငျြးမြားကို ရေးဖှဲ့သူ၊ သီဆိုသူမြားနှငျ့တကှ ဖျောပွထားပါသညျ။တေးသီခငျြးတပုဒျ၏ ဩဇာသကျရောကျမှု ကွီးမားပုံကို ခဈြဒုက်ခသီခငျြး သီဆိုခဲ့သညျ့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျ သမိုငျးဌာနပါမောက်ခ ဦဘညှနျ့အား ခဈြဒုက်ခဦးဘညှနျ့ ဟုသာ လူအမြားက ချေါဝျေါကွပုံကို ပမာပွလကျြ ဖျောပွပေးထားပါသညျ။ထိုခတျေက တက်ကသိုလျကြောငျးသားမြားသညျ ပညာတျောရုံသာမက၊ ရုပျရှငျရိုကျကူးရေးဘကျတှငျလညျး ထူးခြှနျခဲ့ကွကွောငျး ကာတှနျးဦးဟိနျစှနျး နှငျ့ စာရေးဆရာသိနျးဖမွေငျ့ တို့ကို ဥပမာပွရေးသားထားပါသညျ။ဦးဟိနျစှနျး ပုဂံကြောငျးဆောငျသားဘဝက ရိုကျကူးခဲ့သညျ့ ဦးကလိနျကာတှနျးရုပျရှငျနှငျ့အတူ "လာမယျ လာမယျ မကွညျရဲတဲ့၊ တကယျစောငျ့တဲ့အခြိနျ၊ မလှယျပေါကျနဲ့ အိမျ . . ." သီခငျြး ခတျေစားကြျောကွားခဲ့ပုံမြားကို ဖတျရှုနိုငျကွပါသညျ။
ငှရေတုကာလတှငျ ကြောငျးသားသမဂ်ဂ၏ အခနျးကဏ်ဍသညျ အရေးပါလှပွီး၊ တက်ကသိုလျကြောငျးသားမြား ပါဝငျပတျသကျနသေညျ့ နဂါးနီစာအုပျအသငျး ပျေါပေါကျလာပုံနှငျ့ နဂါးနီသီခငျြးအကွောငျးကိုလညျး ဖျောပွပေးထားပါသညျ။တက်ကသိုလျ ရှရေတုကာလ (၁၉၄၆-၁၉၇၀) ကို နိုငျငံတျောသီခငျြးဖွငျ့ စတငျရေးသားထားပါသညျ။
လှတျလပျရေးအကွိုကာလတှငျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး နှငျ့ ဦးနု တို့က သီခငျြးကျောမတီဖှဲ့၍ နိုငျငံတျောသီခငျြးကို ရေးသားစခေဲ့ပါသညျ။ဒျေါစောမွအေးကွညျ၊ ဦးမောငျကလေး (လမျးမတျော) နှငျ့ တက်ကသိုလျစိုး တို့က အဖှဲ့သုံးဖှဲ့ ဖှဲ့ပွီး သီခငျြး ၃ ပုဒျ ရေးပေးသျောလညျး၊ တိုငျးပွုပွညျပွုလှတျတျောက မကွိုကျပေ။သို့ဖွငျ့ ဝိုငျအမျဘီအေ ဆရာတငျ ရေးသညျ့ တို့ဗမာသီခငျြးမှ အမြိုးသားရေးမို့ ကွိုးပမျးကွပါ စာသားနရောမှစပွီး သံစဉျကိုယူလကျြ သီခငျြးစာသားပွောငျးထညျ့လကျြ ယခု မွနျမာတပွညျလုံး သီဆိုနကွေသညျ့ နိုငျငံတျောသီခငျြး ပျေါပေါကျလာပုံကိုပါ ဖျောပွပေေးထားပါသညျ။
၁၉၇၁-၁၉၉၅ စိနျရတုကာလတှငျ ၁၉၇၄ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒေ ရေးဆှဲအတညျပွုရေး အခြိနျဖွဈနေ၍ မဲရုံသို့ မဲရုံသို့ သီခငျြးသံ ပျေါပေါကျလာကွောငျး ရေးသားထားပါသညျ။ထို့နောကျ တဆကျတညျး ဦးသနျ့ အရေးအခငျး၊ ထိုမှတဆငျ့ အလုပျသမားအရေးအခငျး၊ မှိုငျးရာပွညျ့ အရေးအခငျးမြား တဈခုပွီး တဈခု ပျေါလာကာ၊ ၈၈ အရေး အခငျးကွီးကို တက်ကသိုလျကြောငျးသားကြောငျးသူမြားက စခဲ့ကွပုံ။၈၈ အရေးအခငျးကို အာဏာပိုငျမြားက ရကျရကျစကျစကျဖွိုခှငျးခဲ့၍ နိုငျမွနျမာက Dust in the wind သီခငျြးအလိုကျကိုယူလကျြ ရေးသားသညျ့ ကမ်ဘာမကဘြေူးသီခငျြး ပျေါပေါကျပုံကိုလညျး ဖျောပွထားပါသညျ။
စာရေးသူသညျ တက်ကသိုလျ ရှရေတုကာလတုနျးက တပညျ့ဖွဈသူ ဦးမွငျ့ဆှေ နှငျ့ အတူပူးတှဲပွု၍ "တက်ကသိုလျဖှဲ့ သီခငျြးမြား (၁၉၂၀-၁၉၉၅) အား အနုပညာဒဿနရှုထောငျ့မှ လလေ့ာဆနျးစဈခွငျး" အမညျရှိ စာတမျးကို ရေးသားဖတျကွားခဲ့ပါသညျ။ထိုစာတမျးကို ဖွညျ့စှကျလကျြ တေးသံခြိုခြိုတက်ကသိုလျ၊ ရာပွညျ့အကွိုကို ရေးသားခွငျးဖွဈရာ၊ သီခငျြးမြားအား ဒဿနရှုထောငျ့မှ အကဲဖွတျဆနျးစဈသညျ့ အခနျးကို ဆကျလကျရေးသားထားကွောငျး တှရှေိ့ရပါသညျ။
အနုပညာကို ဒဿနိကဗဒေ ဘာသာရပျရှုထောငျ့မှ လလေ့ာတငျပွရာတှငျ ရသပညာ (သို့မဟုတျ) အနုပညာဒဿနနှငျ့ အနုပညာဒဿနဝါဒမြားကို အမြားနားလညျစရေနျ ဦးစှာရှငျးပွထားပါသညျ။ထို့နောကျ တက်ကသိုလျ ငှရေတုကာလအတှငျး ပျေါထှကျခဲ့သညျ့ သီခငျြးမြားကို နိုငျငံရေးနောကျခံ၊ ပညာရေးနောကျခံ၊ အမြိုးဂုဏျ ဇာတိဂုဏျနှငျ့ ယဉျကြေးမှုနောကျခံ၊ တက်ကသိုလျနောကျခံ စသညျ့ နောကျခံအကွောငျးတရားမြားကွောငျ့ ပျေါပေါကျလာပုံအကွောငျး ခှဲခွမျးစိတျဖွာပွထားပါသညျ။ထို့ပွငျ သီခငျြးမြားတှငျ တှရှေိ့ရသညျ့ ဝေါဟာရအသုံးအနှုနျး၊ သံစဉျဖှဲ့ စညျးပုံ၊ သင်ျကတေနှငျ့ နမိတျပုံ အသုံးပွုမှုမြားကို ဆကျလကျရေးသားထားပါသညျ။အဆိုပါသီခငျြးမြားကို ခံစားခကျြဝါဒ ရှုထောငျ့နှငျ့ သရုပျမှနျဝါဒ ရှုထောငျ့မြားအရ ဆကျလကျဆနျးစဈပွထားပါသညျ။အလားတူပငျ ရှရေတုကာလ၊ စိနျရတုကာလအတှငျး အကွုံးဝငျသညျ့ တေးသီခငျြးမြားကို ဒဿနပညာ ရှုထောငျ့အရ လလေ့ာတငျပွထားပါသညျ။
နိဂုံးပိုငျးတှငျ မွနျမာ့ယဉျကြေးမှု သမိုငျးကွောငျးသညျ ရှညျလြားသညျနှငျ့အမြှ ထုထညျကွီးမားကွောငျး၊ ယဉျကြေးမှုအနုပညာ၌ အကွုံးဝငျသညျ့ တေးသီခငျြးတို့တှငျ ခတျေကိုရောငျပွနျဟပျမှု မလှဲမသှတှေရေ့မညျဖွဈကွောငျး နောကျခံသမိုငျးကွောငျးအရ ပျေါပေါကျခဲ့သညျ့ သီခငျြးမြားကို ဥပမာပွ၍ ရေးသားထားပါသညျ။
ထို့နောကျ ကမျြးကိုးစာရငျးမြားကို ဖျောပွထားပွီး ကာတှနျးဆရာမြားက ခတျေအလိုကျရေးဆှဲခဲ့သညျ့ တေးဂီတဆိုငျရာ ကာတှနျးမြားကို ဆကျလကျဖျောပွပေးထားပါသညျ။ကာတှနျးကဏ်ဍအပွီးတှငျ ခတျေအလိုကျပျေါ ပေါကျခဲ့သညျ့ သီခငျြးမြားစာရငျးနှငျ့ စာသားမြားကို ဖျောပွပေးထားပါသညျ။စာအုပျအဆုံးတှငျ စာရေးသူရေးဖှဲ့သညျ့ "ရာပွညျ့ဆီ သှားကွမညျ" ကဗြာကို ဖျောပွထားရာ အဖှငျ့ကဗြာနှငျ့စလကျြ အဆုံးကဗြာဖွငျ့ ပိတျပေးထားပါသညျ။
တေးသံခြိုခြို . . . သညျ တက်ကသိုလျနောကျခံ တေးသီခငျြးမြားကို လလေ့ာတငျပွသညျ့ စာတမျး (စာအုပျ) ဟု ဆိုစကောမူ၊ စာရေးသူ၏ ရနျကုနျတက်ကသိုလျအပျေါ တနျဖိုးထားသညျ့စိတျဓာတျ၊ တိုငျးပွညျနှငျ့ လူမြိုးကို ခဈြမွတျနိုးသညျ့ စိတျအခံဖွငျ့ ရေးသားထားသညျ့ စာအုပျဖွဈကွောငျး တှရှေိ့ရပါသညျ။လကျရှိကာလတှငျ ကမ်ဘာ့တက်ကသိုလျမြား အလယျတှငျ အဆငျ့မြားစှာနိမျ့ကနြဆေဲ တက်ကသိုလျတဈခုအဖွဈ သတျမှတျခံနရေသညျ့ ရနျကုနျတက်ကသိုလျသညျ တခြိနျက မွနျမာနိုငျငံ လှတျလပျရေးအတှကျ ကွိုးပမျးအသကျစှနျ့ကွမညျ့ နိုငျငံခေါငျးဆောငျမြားအား မှေးဖှားပေးရာနရော၊ မွနျမာတို့ ဇာတိသှေးဇာတိမာနျ တကျလာစရေနျ လှုံဆျောမြိုးစခေ့ပြေးသညျ့နရော၊ ခတျေအဆကျဆကျ၏ သမိုငျးပုံရိပျမြား ထငျဟပျနသေညျ့ နရောအဖွဈ သုတသေနရှုထောငျ့၊ ဒဿနဗဒေရှုထောငျနှငျ့ သမိုငျးရှုထောငျ့တို့မှ သုံးသပျပွထားပါသညျ။
ဤစာအုပျတှငျ သီခငျြးမြားကိုဖျောပွရာ၌ ရေးစပျသူ၊ ရေးစပျသညျ့ခုနှဈ၊ ရေးဖှဲ့ရသညျ့ နောကျခံသမိုငျးကွောငျးနှငျ့ သီဆိုသူအမညျမြားကို ပွညျ့စုံစှာဖျောပွပေးထားသဖွငျ့ တေးဂီတဆိုငျရာ သုတသေနပွုမညျ့သူမြားအတှကျ အလှနျအားထားရမညျ့ စာအုပျတဈအုပျဖွဈပါသညျ။ဂီတနှငျ့ သီခငျြးကို ကိုငျတှယျရေးသား စုဆောငျးရသညျမှာ တက်ကသိုလျနောကျခံ ၀တ်ထု၊ ကဗြာ၊ ဆောငျးပါး၊ အကျဆေး ရေးရသညျထကျ မြားစှာပိုမိုတာဝနျကွီးလေးပါသညျ။စာရေးသူ မခငျနု (ဒဿန) သညျ တိုငျးပွညျနှငျ့ လူမြိုးအပျေါ ခဈြသညျ့ စိတျစတေနာ၊ အမိရနျကုနျတက်ကသိုလျကို ခဈြခငျတနျဖိုးထားသညျ့စိတျ၊ တက်ကသိုလျဝနျးကငျြတှငျ တှဆေုံ့ခဲ့ရသညျ့ ဆရာ၊ ဆရာမ တပညျ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျမြားအား ခဈြခငျတှယျတာစိတျ၊ အမိရနျကုနျတက်ကသိုလျကွီးအား တခြိနျတုနျးကကဲ့သို့ ကမ်ဘာ့အလယျတှငျ ပှဲလယျတငျ့သညျ့ ပညာဌာနကွီးအဖွဈ ပွနျလညျတိုးတကျစလေိုသော စိတျစတေနာမြားစှာဖွငျ့ ရေးသားထားကွောငျး တှမွေ့ငျခံစားရစသေညျ့ သုတသေနတဈပိုငျး ပါဝငျသညျ့ စာအုပျကောငျးတဈအုပျဖွဈကွောငျး၊ ညှနျးဆိုလိုကျရပါသညျ။
ဒီဇငျဘာ - ၁၁
မခင်နု (ဒဿန) ရေးသားပြုစုသည့် တေးသံချိုချိုတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၂၀ ရာပြည့်အကြို စာအုပ်ကို စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်က ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေပါသည်။စာအုပ်တွင် အခန်း ၈ ခန်း ပါဝင်ပါသည်။ယင်းတို့မှာ မြန်မာ့သမိုင်းထဲကဂီတ၊ တက္ကသိုလ်နှစ် ၁၀ဝ ကြေးမုံမြင်ကွင်းစုံ၊ အနုပညာဒဿန၊ တက္ကသိုလ်ဖွဲ့ သီချင်းများကို အနုပညာဒဿနရှုထောင့်မှ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ အထွေထွေနိဂုံး၊ ကျမ်းကိုးစာရင်း၊ တေးဂီတဆိုင်ရာ ကာတွန်းများနှင့် တက္ကသိုလ်ဖွဲ့တေးသီချင်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။
၂၀ဝ၃ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် စာရေးသူ မခင်နု (ဒဿန) ၏ ကဗျာကို အဖွင့်ကဗျာအဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး နိဒါန်း၌ စာရေးသူက အဘယ်ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် ဤစာအုပ်ကိုပြုစုခဲ့ကြောင်း အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။
အခန်း (၁) မြန်မာသမိုင်းထဲကဂီတတွင် ပျူခေတ်၊ ပုဂံခေတ်၊ မြင်စိုင်း၊ ပင်းယ၊ အင်းဝခေတ်၊ ညောင်ရမ်းခေတ်၊ ကုန်းဘောင်ခေတ်နှင့် ပါတော်မူပြီးစခေတ်တွင်တို့ တီးခတ်သီဆိုခဲ့သည့် ဂီတနှင့် သီချင်းများအကြောင်းကို ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။
အခန်း (၂) တက္ကသိုလ်နှစ် ၁၀ဝ ကြေးမုံမြင်ကွင်းစုံ ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ငွေရတု၊ ရွှေရတု၊ စိန်ရတုနှင့် ရာပြည့်ကာလများတွင် တွေ့ရှိရသည့် တေးသီချင်းများကို ပေါ်ပေါက်လာပုံ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနှင့်တကွ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပါသည်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ငွေရတုကာလ (၁၉၂၀- ၁၉၄၅) ကို ဖော်ပြရာတွင်၊ ကိုလိုနီခေတ်နှောင်း၊ ငွေရတုကာလ စစ်တေးသံများ၊ ငွေရတုကာလ ချစ်တေးသံများ၊ ရုပ်ရှင်နှင့် ကပွဲတေးသံများ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ နဂါးနီ၊ အာဏာရှင်၊ တို့ဗမာနှင့် ပါတော်မူ စသည့် ခေါင်းစဉ်ခွဲငယ်များဖြင့် ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။
ကိုလိုနီခေတ်နှောင်းကာလ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို အကျဉ်းချုံးရေးသားပြပြီးနောက်၊ ၁၉၂၀ ကျောင်းသားသပိတ်တွင် ကျဆုံးခဲ့ရသည့် ဗိုလ်အောင်ကျော် ကို ဂုဏ်ပြုရေးသားသည့် သီချင်းများပေါ်ထွက်ခဲ့ပုံကို ရေးသားထားပါသည်။ထို့နောက် တက္ကသိုလ် ငွေရတုကာလအတွင်း (၁၉၂၀-၁၉၄၅) ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် တေးသီချင်းများ ပေါ်ပေါက်သီဆိုခဲ့ကြသည့် အကြောင်းရင်းခံများအား ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ဥပမာ - ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို မြန်မာနှင့် ဂျပန်တပ်များ ပြန်လည်သိမ်းပိုက်စဉ်၊ ဘီအိုင်အေရဲဘော်များကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အပါအဝင် လူထုက ဆရာရွှေတိုင်ညွှန့် ရေးသားသည့် ဖလ်နေဝင်းသီချင်းကို သီဆို၍ ကြိုဆိုခဲ့ကြပုံများနှင့် ဘီအိုင်အေ၊ ဘီဒီအေခေတ်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် သီချင်းများအကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် တေးဂီတ၏ အစွမ်းထက်မြက်ပုံကို သိရှိနားလည်သူဖြစ်ရာ ပြည်သူကို သီချင်းဖြင့်စည်းရုံးရန် ဆရာရွှေတိုင်ညွှန့်အား သီချင်းရေးဖွဲ့ စေခဲ့ပါသည်။ဆရာရွှေတိုင်ညွှန့် က ပြည်သူ့တပ်မတော်သီချင်းကို ၁၉၄၄ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရေးသားပေးခဲ့ပြီး နောင်တွင် သီချင်းနာမည်ကို တပ်မတော်အင်အားဟု ပြောင်းလဲခဲ့ပုံများနှင့်တကွ အဆိုပါသီချင်းသည် ဆရာရွှေတိုင်ညွှန့်၏ နောက်ဆုံးလက်ရာဖြစ်ကြောင်း စုံလင်စွာဖော်ပြထားပါသည်။
တက္ကသိုလ် ငွေရတုကာလအတွင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် အချစ်သီချင်းများအဖြစ် သက်ဝေ၊ ချစ်ဒုက္ခ၊ မိုးဒေဝါ သီချင်းများကို ရေးဖွဲ့သူ၊ သီဆိုသူများနှင့်တကွ ဖော်ပြထားပါသည်။တေးသီချင်းတပုဒ်၏ ဩဇာသက်ရောက်မှု ကြီးမားပုံကို ချစ်ဒုက္ခသီချင်း သီဆိုခဲ့သည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာနပါမောက္ခ ဦဘညွန့်အား ချစ်ဒုက္ခဦးဘညွန့် ဟုသာ လူအများက ခေါ်ဝေါ်ကြပုံကို ပမာပြလျက် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ထိုခေတ်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသည် ပညာတော်ရုံသာမက၊ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးဘက်တွင်လည်း ထူးချွန်ခဲ့ကြကြောင်း ကာတွန်းဦးဟိန်စွန်း နှင့် စာရေးဆရာသိန်းဖေမြင့် တို့ကို ဥပမာပြရေးသားထားပါသည်။ဦးဟိန်စွန်း ပုဂံကျောင်းဆောင်သားဘဝက ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ဦးကလိန်ကာတွန်းရုပ်ရှင်နှင့်အတူ "လာမယ် လာမယ် မကြည်ရဲတဲ့၊ တကယ်စောင့်တဲ့အချိန်၊ မလွယ်ပေါက်နဲ့ အိမ် . . ." သီချင်း ခေတ်စားကျော်ကြားခဲ့ပုံများကို ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါသည်။
ငွေရတုကာလတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၏ အခန်းကဏ္ဍသည် အရေးပါလှပြီး၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် နဂါးနီစာအုပ်အသင်း ပေါ်ပေါက်လာပုံနှင့် နဂါးနီသီချင်းအကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားပါသည်။တက္ကသိုလ် ရွှေရတုကာလ (၁၉၄၆-၁၉၇၀) ကို နိုင်ငံတော်သီချင်းဖြင့် စတင်ရေးသားထားပါသည်။
လွတ်လပ်ရေးအကြိုကာလတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ဦးနု တို့က သီချင်းကော်မတီဖွဲ့၍ နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ရေးသားစေခဲ့ပါသည်။ဒေါ်စောမြအေးကြည်၊ ဦးမောင်ကလေး (လမ်းမတော်) နှင့် တက္ကသိုလ်စိုး တို့က အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး သီချင်း ၃ ပုဒ် ရေးပေးသော်လည်း၊ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်က မကြိုက်ပေ။သို့ဖြင့် ဝိုင်အမ်ဘီအေ ဆရာတင် ရေးသည့် တို့ဗမာသီချင်းမှ အမျိုးသားရေးမို့ ကြိုးပမ်းကြပါ စာသားနေရာမှစပြီး သံစဉ်ကိုယူလျက် သီချင်းစာသားပြောင်းထည့်လျက် ယခု မြန်မာတပြည်လုံး သီဆိုနေကြသည့် နိုင်ငံတော်သီချင်း ပေါ်ပေါက်လာပုံကိုပါ ဖော်ပြေပေးထားပါသည်။
၁၉၇၁-၁၉၉၅ စိန်ရတုကာလတွင် ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲအတည်ပြုရေး အချိန်ဖြစ်နေ၍ မဲရုံသို့ မဲရုံသို့ သီချင်းသံ ပေါ်ပေါက်လာကြောင်း ရေးသားထားပါသည်။ထို့နောက် တဆက်တည်း ဦးသန့် အရေးအခင်း၊ ထိုမှတဆင့် အလုပ်သမားအရေးအခင်း၊ မှိုင်းရာပြည့် အရေးအခင်းများ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပေါ်လာကာ၊ ၈၈ အရေး အခင်းကြီးကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများက စခဲ့ကြပုံ။၈၈ အရေးအခင်းကို အာဏာပိုင်များက ရက်ရက်စက်စက်ဖြိုခွင်းခဲ့၍ နိုင်မြန်မာက Dust in the wind သီချင်းအလိုက်ကိုယူလျက် ရေးသားသည့် ကမ္ဘာမကျေဘူးသီချင်း ပေါ်ပေါက်ပုံကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
စာရေးသူသည် တက္ကသိုလ် ရွှေရတုကာလတုန်းက တပည့်ဖြစ်သူ ဦးမြင့်ဆွေ နှင့် အတူပူးတွဲပြု၍ "တက္ကသိုလ်ဖွဲ့ သီချင်းများ (၁၉၂၀-၁၉၉၅) အား အနုပညာဒဿနရှုထောင့်မှ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း" အမည်ရှိ စာတမ်းကို ရေးသားဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ထိုစာတမ်းကို ဖြည့်စွက်လျက် တေးသံချိုချိုတက္ကသိုလ်၊ ရာပြည့်အကြိုကို ရေးသားခြင်းဖြစ်ရာ၊ သီချင်းများအား ဒဿနရှုထောင့်မှ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်သည့် အခန်းကို ဆက်လက်ရေးသားထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
အနုပညာကို ဒဿနိကဗေဒ ဘာသာရပ်ရှုထောင့်မှ လေ့လာတင်ပြရာတွင် ရသပညာ (သို့မဟုတ်) အနုပညာဒဿနနှင့် အနုပညာဒဿနဝါဒများကို အများနားလည်စေရန် ဦးစွာရှင်းပြထားပါသည်။ထို့နောက် တက္ကသိုလ် ငွေရတုကာလအတွင်း ပေါ်ထွက်ခဲ့သည့် သီချင်းများကို နိုင်ငံရေးနောက်ခံ၊ ပညာရေးနောက်ခံ၊ အမျိုးဂုဏ် ဇာတိဂုဏ်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံ၊ တက္ကသိုလ်နောက်ခံ စသည့် နောက်ခံအကြောင်းတရားများကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာပုံအကြောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြထားပါသည်။ထို့ပြင် သီချင်းများတွင် တွေ့ရှိရသည့် ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်း၊ သံစဉ်ဖွဲ့ စည်းပုံ၊ သင်္ကေတနှင့် နမိတ်ပုံ အသုံးပြုမှုများကို ဆက်လက်ရေးသားထားပါသည်။အဆိုပါသီချင်းများကို ခံစားချက်ဝါဒ ရှုထောင့်နှင့် သရုပ်မှန်ဝါဒ ရှုထောင့်များအရ ဆက်လက်ဆန်းစစ်ပြထားပါသည်။အလားတူပင် ရွှေရတုကာလ၊ စိန်ရတုကာလအတွင်း အကြုံးဝင်သည့် တေးသီချင်းများကို ဒဿနပညာ ရှုထောင့်အရ လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။
နိဂုံးပိုင်းတွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းကြောင်းသည် ရှည်လျားသည်နှင့်အမျှ ထုထည်ကြီးမားကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ၌ အကြုံးဝင်သည့် တေးသီချင်းတို့တွင် ခေတ်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်မှု မလွဲမသွေတွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းအရ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် သီချင်းများကို ဥပမာပြ၍ ရေးသားထားပါသည်။
ထို့နောက် ကျမ်းကိုးစာရင်းများကို ဖော်ပြထားပြီး ကာတွန်းဆရာများက ခေတ်အလိုက်ရေးဆွဲခဲ့သည့် တေးဂီတဆိုင်ရာ ကာတွန်းများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ကာတွန်းကဏ္ဍအပြီးတွင် ခေတ်အလိုက်ပေါ် ပေါက်ခဲ့သည့် သီချင်းများစာရင်းနှင့် စာသားများကို ဖော်ပြပေးထားပါသည်။စာအုပ်အဆုံးတွင် စာရေးသူရေးဖွဲ့သည့် "ရာပြည့်ဆီ သွားကြမည်" ကဗျာကို ဖော်ပြထားရာ အဖွင့်ကဗျာနှင့်စလျက် အဆုံးကဗျာဖြင့် ပိတ်ပေးထားပါသည်။
တေးသံချိုချို . . . သည် တက္ကသိုလ်နောက်ခံ တေးသီချင်းများကို လေ့လာတင်ပြသည့် စာတမ်း (စာအုပ်) ဟု ဆိုစေကာမူ၊ စာရေးသူ၏ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပေါ် တန်ဖိုးထားသည့်စိတ်ဓာတ်၊ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးကို ချစ်မြတ်နိုးသည့် စိတ်အခံဖြင့် ရေးသားထားသည့် စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။လက်ရှိကာလတွင် ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်များ အလယ်တွင် အဆင့်များစွာနိမ့်ကျနေဆဲ တက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံနေရသည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည် တချိန်က မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းအသက်စွန့်ကြမည့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များအား မွေးဖွားပေးရာနေရာ၊ မြန်မာတို့ ဇာတိသွေးဇာတိမာန် တက်လာစေရန် လှုံဆော်မျိုးစေ့ချပေးသည့်နေရာ၊ ခေတ်အဆက်ဆက်၏ သမိုင်းပုံရိပ်များ ထင်ဟပ်နေသည့် နေရာအဖြစ် သုတေသနရှုထောင့်၊ ဒဿနဗေဒရှုထောင်နှင့် သမိုင်းရှုထောင့်တို့မှ သုံးသပ်ပြထားပါသည်။
ဤစာအုပ်တွင် သီချင်းများကိုဖော်ပြရာ၌ ရေးစပ်သူ၊ ရေးစပ်သည့်ခုနှစ်၊ ရေးဖွဲ့ရသည့် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနှင့် သီဆိုသူအမည်များကို ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပေးထားသဖြင့် တေးဂီတဆိုင်ရာ သုတေသနပြုမည့်သူများအတွက် အလွန်အားထားရမည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။ဂီတနှင့် သီချင်းကို ကိုင်တွယ်ရေးသား စုဆောင်းရသည်မှာ တက္ကသိုလ်နောက်ခံ ၀တ္ထု၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ အက်ဆေး ရေးရသည်ထက် များစွာပိုမိုတာဝန်ကြီးလေးပါသည်။စာရေးသူ မခင်နု (ဒဿန) သည် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ် ချစ်သည့် စိတ်စေတနာ၊ အမိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ချစ်ခင်တန်ဖိုးထားသည့်စိတ်၊ တက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ရသည့် ဆရာ၊ ဆရာမ တပည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ချစ်ခင်တွယ်တာစိတ်၊ အမိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးအား တချိန်တုန်းကကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ပွဲလယ်တင့်သည့် ပညာဌာနကြီးအဖြစ် ပြန်လည်တိုးတက်စေလိုသော စိတ်စေတနာများစွာဖြင့် ရေးသားထားကြောင်း တွေ့မြင်ခံစားရစေသည့် သုတေသနတစ်ပိုင်း ပါဝင်သည့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ညွှန်းဆိုလိုက်ရပါသည်။
ဒီဇင်ဘာ - ၁၁